Umdlalo "sikelo" ukuthi izibuyekezo kulesi sihloko - okuzobe kudlalelwa yaseshashalazini "Atelier". It yasungulwa ngu inkampani ukukhiqizwa, "Independent Theatre Project". Ukusebenza esiteji njengoba isizini 2013/2014 isikhathi.
Umdlalo "sikelo", okuyinto libuyekeza ikakhulukazi omuhle, yafakwa iminyaka engu-eneminyaka engu-20 yokuba khona we "Independent Theatre Project". Ngakho nanku indlela yokuqala Abadali yalo banquma ukugubha lolu suku wonke.
"Scissors" - kuyinto iso kuyindida play nguPawulu Portner. Sekuyisikhathi eside Staging yimpumelelo phezu ezineka ezingodweni ezahlukene yaseshashalazini emhlabeni. Ikakhulukazi, eYurophu nase-United States. It has a umlando ocebile. Kuyadingeka ukuthi e-Boston, eyaphi we repertoire engu-35.
Sici Its main wukuthi ababukeli mhlawumbe protagonists. Basuke aphenya ubugebengu kwenzeka enkundleni futhi ukuthola ukuthi ngubani unecala abadlali. Yingakho ukusebenza "Scissors" amazwana wathola eziningi kangaka. Nge ngesakhiwo efanayo, ababukeli abhekene kanini.
Okuzobe kudlalelwa yaseshashalazini "Atelier"
Ethiyetha "Atelier" le umphenyi kuyindida ukubeka Lithuanian yaseshashalazini umqondisi Dainius Kazlauskas. Wakwazi ukusula cishe ngokuphelele umehluko phakathi izilaleli futhi umlingisi. Nikeza umbukeli a zinamalungelo agcwele okuvota.
Ngokuhamba play isenzo eyisimanga for yaseshashalazini wesimanje. Eminyakeni embalwa edlule lokhu ayikwazanga nokuyicabanga. Ukaputeni, ngubani ephethwe uphenyo, iqala ukuheha ababukeli ukuchaza lokubulala engaqondakali. "Scissors" - ukusebenza-uphenyo, okuyinto ngeke abashiye ubani ngabandayo.
Into esemqoka, izithameli ekugcineni kudingeka sithole ukuthi obani ngineliphutsa. Lena format engavamile kakhulu interactive ngokushesha wathandana izihlwele.
Abalingisi sithenge eziningana final ukusebenza. Iyiphi ukuqedela umdlalo, kuye ngokuthi yini sinqumo ngeke akwazi ukukutholela indawo, umuntu enecala.
nobunzima ikakhulukazi ekwenzeni play itholakala lokuthi ukuthi izilaleli akazange nje uvotele icala, kodwa futhi khuluma kwemifanekiso ephelele ukuthi musa ukushiya umlingisi akukameli kube iqhinga. Ukuze kulungiswe le nkinga, iqondiswe ngqo waya se-internship e-United States, lapho afundela khona ngaleso abaqondisi American "Scissors".
Wadlala indima enkulu empumelelweni yobusuku play "sikelo" yokusakaza. Phela, esiteji - izinkanyezi wangempela ethiyetha kazwelonke.
Ikhaya actor - the nosomahlaya Georgiya Dronova. Yena Kuyaziwa ukuba abalandeli Russian uchungechunge TV. Udlale "Voronin", "Sasha + Masha" ku ezisemadolobheni fantasy Timur Bekmambetov sika "Ebusuku Buka" komculo umfanekiso umhlaziyi sika Night Buka Dabula. Enkundleni, kokuba yingxenye productions "The Savage," "Boeing-Boeing", "Isibhedlela" Moulin Rouge. "
Umlingisikazi Marina Dyuzheva
Esikhathini play "sikelo" Marina Dyuzheva sigcwalisa esebenza duo. Ku-akhawunti yakhe - eningi izindima sici amafilimu, kuhlanganise Soviet. Ababukeli ngeke khumbula ahlekisayo wakhe Alekseya Koreneva "Ngenxa yezizathu umndeni", adventure umphenyi Aleksandra Fayntsimmera "Tavern ku Pyatnitskaya" lyrical ahlekisayo Mihaila Kozakova "Pokrovsky Amasango".
Ngo yaseshashalazini, yena odlale nge Dronov emdlalweni "Boeing-Boeing". Izindima zakhe yamuva kufanele futhi ukugqamisa play "Bathi ukudubula amahhashi, ungavumi?" nelithi "Ikhalenda Girls '.
Kona kanye play senzeka endaweni yokugunda izinwele. Ngakho-ke, zonke abadlali ngokuyinhloko lidlule bacecesheka.
Ekuqaleni isethi ubulawa. Isisulu inkosikazi salon ubuhle. Wensimbi lobugebengu engavamile kakhulu - isikele. Ngaphansi izinsolo baqiniseka konke: Izivakashi Barber ngokwabo okuyinhloko. Uphenyo zalobu bugebengu ongaqondakali kwenzeka ingxoxo zangokwasemuva zezinhlelo izenzakalo oluhlelwe ngezihloko futhi zamanje ezenzekayo eMoscow eRussia. Ngenxa yalokhu ayingxenye yombhalo kushintsha njalo, in the play eziningi Improvisation.
Lokhu kufana nezithameli. Phela, nabo basuke baqale ukuhlala endaweni eyodwa isikhathi kanye abadlali ukuxoxa izindaba zezwe, ngentuthuko yakamuva kusukela kwezombangazwe, ezemidlalo impumelelo njalo.
Lokhu ukukhiqizwa iyingqayizivele ngempela endaweni yesehlakalo yasekhaya. Ivame ukubizwa okukhethekile. Abadali of the play "sikelo," wabona ukuthi TV ayisekeli ukulala. Ngakho-ke, kufanele ukudala izindlela ezintsha zokuxhumana nge izilaleli. Njalo ukufakazela ukuthi yaseshashalazini uyaphila, naphezu kweqiniso lokuthi wangcwatshwa ngaphezu kwesikhathi esisodwa. Ikakhulukazi ngemva kokuzalwa ithelevishini nokuthuthukiswa mass.
Abadali "Scissors" Uzama ukufunda kusuka abalobi Western ewuchungechunge yethelevishini, osuvele kahle amakhono ngokushesha ukwenza icebo lokuqala bese esinjalo esingalindelekile buchitha ababuki bayadideka, ngisho noma imizuzu embalwa edlule babeqiniseka ngubani villain main.
создан в первую очередь для людей. Abadali "Scissors" akholelwa ukuthi unyaka ethiyetha eyakhelwe ngokuyinhloko kubantu. Futhi noma kunjalo, hhayi ngenjongo yokuhle baxgeki. Ngakho-ke, enye yezinkinga ezibaluleke kakhulu ngabo kuba: "Futhi lokho siyaphi namuhla ukubamangaza nokunqoba izilaleli?"
Esinye isici "sikelo" - ubuncane ezintsha wesimanje imfashini. Enkundleni, akukho izimpukane, lutho Kuqhuma. Kodwa ngisho ngaphandle ababuki kukhona ingaqiniseki njalo futhi injabulo.
Into esemqoka kule ukukhiqizwa - kungcono ukuxhumana bukhoma, okuyinto uya eba nzima kakhulu ukufeza. Ikakhulukazi lapho inkhulumomphendvulwano okwenzeka phakathi umlingisi kanye nezethameli. Dialogue akuyona imfanelo engabonakali, hhayi kaPlato, kodwa kuyinto ngokomzimba futhi ngempela.
Izibuyekezo of the play
Cishe engashiyi ngabandayo play "sikelo" eyodwa. Izibuyekezo ngakho ngakho yenza sikwazi ukwethula isithombe esiphelele okwenzekayo enkundleni, ke ubona kanjani umbukeli abavamile.
Abaningi bathi lokhu fun and kulungiselelwa dynamic kushintsha njalo. Kungenza kakhulu multi-yobudala umndeni insini nge amahlaya zonke kusihlwa. Ngiyavuma, ingaphansi amandla zonke wobuciko.
abadlali abaziwayo zinhle kakhulu, kuye kwaphawulwa ukubuyekeza, futhi lapho show iba exhumana isiqala ukuheha izethameli esenzweni, ukubeka futhi akayikhohliwe.
Nokho, abanye bakholelwa ukuthi izinzuzo kule ukudlala impela kancane. Omunye wabo - lokhu Yiqiniso, ukuxhumana. Owesibili - brilliant umdlalo ehola umlingisi Dronov. Ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi iningi isenzo anakho sokwenza.
Yini embi ngalo - the vulgarity, okuyinto eligcwele le ukusebenza. Amahlaya ku "ngezansi ibhande" okuyihlazo eziningi. Iningi lawo ahlekisa kakhulu. Hall njengasezindaweni ngenxa yaleli isihloko ocansini. Ngaphezu nabalingisi amahlaya ngokuvamile ziqala schematically zibonisa izigcawu copulation, okwenza umbukiso inkanuko nakakhulu.
Ngaphezu kwalokho, abaningi namanje ungathandi indlela suit enkundleni interactive, uqhathanisa okwenzekayo ne farce evamile. Noma amaqembu zezingane, letisebenta Animators lulwimi professional.